मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिकः १८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण स्वीकृत, अरु निर्णय के-के भयो ? - Nepal Page Nepal Page
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिकः १८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण स्वीकृत, अरु निर्णय के-के भयो ?
काठमाडौं, २५ मंसिर । सरकारले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले गत कात्तिक २७ र मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले विश्व विकास बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली करिब १८ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । गत मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता समेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार नेपालको शहरी शासन तथा पूर्वाधार विकासका लागि सो ऋण लिन लागिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ । कोभिड १९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहयताका लागि कर्जा दिनका लागि सो कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । अतिप्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी ३ भागमा विभाजन गरी सो आधारमा कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई सहायता दिन कार्यविधि स्वीकृत गरेर लागू गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
अरु के-के भयो निर्णय ? पढ्नुहोस्…
प्रचण्डको आरोपमाथि ओलीले फर्काए यस्तो जवाफ (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, १३ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक १६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सचिवालय बैठकमा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव आज : ढकाल र प्रधानबीच कडा प्रतिष्पर्धा
रूकुमपश्चिममा जन्ती सवार जीप दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु
बैठक शनिबार १ बजे बस्ने नेकपा सचिवालय, अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव पेश हुने
काठमाडौं, १३ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक १६ गतेसम्मका लागि स्थगित
नेकपा सचिवालय बैठक सकियो, अर्को बैठक १६ गते धुम्बाराहीमा बस्ने
काठमाडौं, १३ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आउँदो मंगलबार फेरि बस्नेगरि
नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटार जारी
काठमाडौं, १३ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बालुवाटारमा जारी छ
भोली चिनियाँ रक्षामन्त्री नेपाल आउने परराष्ट्रद्वारा सार्वजनिक ( यस्तो छ भ्रमणतालिका)
काठमाडौं, १३ मंसिर । चिनियाँ रक्षामन्त्री एवं पहिलो बरियताका स्टेट काउन्सिलर जनरल वेइ फेङ्गे औपचारिक
रूकुम, १३ मंसिर । रूकुम पश्चिममा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको
काठमाडौं, १३ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज शनिबार १ बजे
नेपालको सत्ताले नदेखेको ‘सपना’ बीबीसीको सय प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा
काठमाडौं – परिबन्दले पशुपति आर्यघाटमा बेवारिसे शव जलाउने काम गर्न थालेकी म्याग्दीकी सपना रोक्का मगर
पर्यटकीय केन्द्रः झण्डै आठ महिनादेखि बन्द रहेको ‘ठमेल’ लयमा फर्कंदै
काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा रहेको ठमेल विस्तारै लयमा फर्कंदै